Ahoana ny fomba ahazoana miverimberina tsara amin'ny fomba maimaimpoana sy mivantana?
Ny rohy ivelany na atambatra dia toy ny motera ho an'ny SEO amin'izao androntsika izao. Heverina ho tian'ny mpikaroka ny valiny, indrindra amin'ny Google ary manampy azy ireo hamantatra ny laharan'ny sehatra amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Araka ny loharano sasantsasany, ny rohy anatiny dia ny fizarana faha-Google ny singa faharoa raha vao misy ny votoaty. Raha tsy misy backlinks ny orinasa dia tsy ho hita amin'ny mpanjifa mety ho anao ary avy eo dia ho fahaverezan'asa.
Ny algorithm amin'izao fotoana izao dia tsy miasa toy ny taona maromaro talohan'io, raha ny isan'ny rohy tafiditra dia ny singa manan-danja indrindra ho an'ny rohy mahasoa. Amin'izao fotoana izao dia manombana ny kalitaon'ny backlinks ny fitaovam-pikarohana fa tsy ny habetsahany. Zava-dehibe avy amin'ny loharano misy ny rohy misy anao ary ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny votoaty ao amin'ny tranonkala iray. Raha ny marina, ny fampiasana fitaovam-pikarohana dia mampiasa antony maromaro mba hamaritana ny kalitaon'ny rohy tafiditra ao amin'ny tranonkala. Na izany aza, ireo mpanamboatra rohy manana traikefa dia manavaka ireo sokajy efatra lehibe - ny maha-zava-dehibe, ny fitokisana, ny fahasamihafana ary ny fahefana. Noho izany, ireo rohy rehetra fidirana aminao dia tokony hanaraka ireo fepetra efatra ilaina ireo. Raha tsy manaraka ireo fepetra ireo izy ireo, dia tokony hiezaka hanatsara ny kalitao ianao na hampiasa ny Google Disavow Tool mba hanesorana azy ireo.
Noho izany, andeha isika handinika vitsivitsy izay ilaina hahazoana lohamilina tsara amin'ny tranonkala mendrika sy azo itokisana.
Fomba hahazoana rindran-tsavily tsara kokoa hanatsarana ny laharan'ny sehatry ny tranokala
Ny tanjon'ny fanorenana rohy dia tsy ny hampifanaraka ny rohy amin'ny natiora dia ny hampifandray ny rohy. Ny fomba voajanahary indrindra amin'ny famolavolana ravinkazo dia ny famokarana ny kalitao sy ny votoatiny mba hampifandraisana ny mpampiasa azy. Na izany aza, raha ny zava-misy dia tsy mitranga foana izany. Ny fomba mahomby indrindra dia ny mikendry ireo loharanom-baovaon'ny lohamilina avo lenta miaraka amin'ny votoatin-dresaka tiany hampidirana azy. Ny olana dia sarotra ny mahazo rohy avy amin'ny tranokalan'ny PageRank satria miara-miasa amin'ny sehatra malaza izy ireo ary manana fenitra avo lenta. Na izany aza, ato amin'ity andininy ity dia manangona tetik'ady fananganana rindrambaitra mahomby izay hanampy anao hahazoana rindran-damina tsara.
Ny teknikam-pamoretana napetrak'i Brian Dean
Mila manao ny fikarohana fikarohana ianao ary mahita tranokala na tranonkala tsy misy intsony. Amin'ny sehatra manaraka, mila mampiasa rindrambaiko rindranasa matihanina ianao ary hijery ireo domains mifandray amin'ny pejy izay tsy misy intsony. Mba hahazoana io fampahalalana io dia azonao ampiasaina ny Semalt Web Analyzer na Tool Crawling Majestic. Amin'ny sehatra manaraka, mila manavaka ny mombamomba ny indostria sy ny sehatra sarobidy ianao. Mamorona ny lahatsoratra vaovao na mamoaka lahatsoratra iray misy anao raha toa ka mifikitra amin'ny teboka izy ireo ary manolotra ireo tompon'ny tranonkala hanolo ny rohy tsy misy aterineto amin'ny tranokala vaovao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia manaiky an'io soso-kevitra io ny tompon'ny tranonkala satria izy io no fotoana tsara indrindra hanangonan'izy ireo ny rohy mankany amin'ny rohy miaraka amin'ny dololles iray miampy dofollow.
Voalohany,. Na izany aza, tsy mitovy amin'ny fampiharana izany. Araka io fomba io, mila mandinika ireo sehatra nokendrena ianao ary hahita ny rohy tsy tapaka izay mitarika mankany amin'ny pejy tsy misy. Avy eo amin'ny fampiasana ny Chrome Extension Checker Extension Checker, mila mitady rohy izay manondro pejy diso avy amin'ny loharanom-pejy iray manokana. Amin'ny fampiasana ity extension Google ity, dia ho hitanao ny rohy tsy hita isa. Ilainao ny manavaka ireo rohy ireo ary tsy mahita afa-tsy ny mahasarika sy ny fifamoivoizana. Avy eo dia mila mamorona lahatsoratra matihanina amin'ny lohahevitra iray izay tranonkala iray ianao ary manolo-tena amin'ny fifanarahana tsara ho an'ireo tanjona voafaritra, manolotra azy ireo hifandray amin'ny tranokalanao fa tsy ny fahadisoana iray Source .